doremi – Page 2
Home » About doremi (Page 2)
Guitar, Multi Effect | doremi | 2014年1月23日
G-System isamasterpiece. It asks: what ifaguitarist could have it all? And then delivers inapackage almost too good to be true. The best of the best effec...
Cars for Sale | doremi | 2013年12月22日
2003 Model, Alphard car, black around ks265L
Cars for Sale | doremi | 2013年12月20日
Grey colour, 7F/xxxx. TV back camera, Dvd player, sensor sonar,front fog light, All power windows, Anti lock break system, 2008 model x grade, owner book inhand...
Books | doremi | 2013年12月19日
17342 total views,0today
Cars, Mini | doremi | 2013年12月6日
၂​၀​၁⁠၁​ခု​နှစ် Geneva Motor Show မှာ​စတင်​ပြသ​ခဲ့​သော Miniရဲ. Rocketman Concept ဖြစ်​ပါ​တယ််။ လက်​ရှိ Cooper ထက် Original Mini ရဲ့ Concept နဲ့​ပို​ပြီး​တော့​့​...
Zoom g3 multi-effect
Multi Effect | doremi | 2013年12月4日
Feature A partner for recording. A powerful weapon for live performance. With the G3 version 2.0 and the G3X, the maximum number of simultaneous effects has be...
197480 total views,0today
Cars, Honda, Honda Fit | doremi | 2013年12月3日
Honda Fit Year 2007 Oct Model
Cars, Honda, Honda Fit | doremi | 2013年12月2日
JCB ကို ဒီဇင်ဘာ​လ​အတွင်း အသုံးပြု​နိုင်​မည်
doremi | Myanmar Business | 2013年12月9日
Written by စ,ချို​ကို
ဂျပန်​နိုင်ငံ​အခြေ​စိုက် နိုင်ငံ​တကာ​သုံး ငွေ​ပေး​ချေ​ကတ်​တစ်​ခု​ဖြစ်​သော JCB ကတ်​ကို ပြည်​တွင်း​၌ ဒီ​ဇင် ဘာ​လ​အတွင်း စတင်​အသုံးပြု​နိုင်​မည်​ဖြစ်​သည်​ဟု JCB International Co., Ltd. (Myanmar) ၏ Operating Manager ဦး​ဥက္ကာ​မင်းလွင်​က ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်​တွင် မဇ္ဈိမ​ကို ပြော​သည်။
JCB ကတ်​ကို ပြည်​တွင်း​ရှိ MPU နက်ခ်​ဝပ်​ချိတ်ဆက်​ထား​သည့်​ဘဏ်​များ​၏ ATM စက်​များ​တွင် အသုံး ပြု​နိုင်​ရန် စီစဉ်​နေ​ပြီး လက်​ရှိ​တွင် စမ်းသပ်​အသုံးပြု​မှု​များ ပြ​လုပ်​နေကာ ဒီဇင်ဘာ​လ​အတွင်း​တွင် စတင်​သုံးစွဲ​နိုင်​မည်​ဖြစ်​သည်​ဟု ၎င်း​က ပြော​သည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံ ယူရမည့် သင်ခန်းစာ
doremi | Myanmar Business | 2013年12月5日
အာ​ရှ​ဒေသ​၏ နယ်​မြေ​သစ်​တစ်​ခု​၌ ရင်းနှီး မြှုပ်​နှံ​မည်​ဆို​ပါ​လျှင် အောင်မြင်​မှု​ရ​ရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်​ရ​ပါ​မည်​နည်း။
ယခု​အခါ​၌ မြန်မာ​နိုင်ငံ​မှ ထိပ်​တန်း​စီးပွား​ရေး လုပ်​ငန်း​ရှင်​များ​ကြား​၌ တီး​တိုး​တီး​တိုး ပြော​နေ​သည့်​အသံ​များ ထွက်ပေါ်​နေ​မည်​က အသေ​အချာ ဖြစ်​ပါ​၏။
အနာဂတ်​ကာလ​၌ အာ​ရှ​ဒေသ​၏ ကျား​တစ်​ကောင် ဖြစ်လာ​တော့​မည့် မြန်မာ​နိုင်ငံ​၏ စီးပွား​ရေး​သည် ယခင်​က အချိန်​အတန်​ကြာ ဆုတ်ဆိုင်း​နေရာ​မှ ယခု​အခါ ရင်းနှီး​မြှုပ်​နှံ​လို​သူ​များ​ကြား အလောင်း​အစား​ပြုလုပ်​ရန်​ပင် ကောင်းမွန်​သည့် အခြေအနေ​တစ်​ခု သို့ ရောက်​နေ​ပြီ ဖြစ်​ပါ​၏။
၂​၀​၁​၄ တွင် ကိုး​ရီး​ယား​နှင့် ဂျပန်​သို့ တိုက်ရိုက် ပုံ​မှန်​ခရီး​စဉ်​ပြေး​ဆွဲ​ရန် MAI စီစဉ်
Written by သီ​ဟ​ကို​ကို
Myanmar Airways International (MAI) က ၂​၀​၁​၄​ခု​နှစ် တွင် ကိုး​ရီး​ယား​နှင့် ဂျပန်​နိုင်ငံ​များ​သို့ တိုက်ရိုက်​ပုံ​မှန်​ခရီး​စဉ်​များ ပျံ​သန်း​ပြေး​ဆွဲ​သွား​ရန် အစီ​အစဉ်​ရှိ​သည်​ဟု Myanmar Airways International ၏ ပြန်ကြား​ရေး​တာဝန်​ခံ ဒေါ်​အေး​မ​ရ​သာ​က မဇ္စျိ​မ​သို့ ပြော​သည်။
လက်​ရှိ​အချိန်​တွင် ပြည်​တွင်း​လေ​ကြောင်း​လိုင်း​များ​အနေ​ဖြင့် ဂျပန်​နှင့် ကိုး​ရီး​ယား​နိုင်ငံ​များ​သို့ တိုက်ရိုက်​ပုံ​မှန် ပြေး​ဆွဲ​သည့် ခရီး​စဉ်​များ မ​ရှိ​သေး​ဘဲ ကိုး​ရီး​ယား​နှင့် ဂျပန်​အခြေ​စိုက် လေ​ကြောင်း​လိုင်း​များ​သာ ပြေး​ဆွဲ​လျက်​ရှိ​သည်။
MAI ၏ ပြန်ကြား​ရေး​တာဝန်​ခံ ဒေါ်​အေး​မ​ရ​သာ​က “၂​၀​၁​၄ ထဲ​မှာ MAI အနေ​နဲ့​လျာ​ထား​တဲ့ အစီ​အစဉ်​ပါ၊ အဓိက​က မြန်မာ​နဲ့ ကိုး​ရီး​ယား၊ ဂျပန်​ကို ခရီးသည် အသွားအလာ တိုးတက်​တဲ့ အခြေအနေ​အပေါ်​မူ​တည်​ပြီး ပြေး​ဆွဲ​သွား​မှာ​ပါ၊ ပုံ​မှန် အချိန်​ဇယား​တိုင်း ပြေး​ဆွဲ​မှာ​ဆို​တော့ ပုံ​မှန်​သွား​လာ​တဲ့ ခရီးသည် ရှိ​ရ​မယ် “ဟု ပြော​သည်။
One of the most technically gifted guitar players in the world and,as one of the founders of Dream Theater.
3 votedvote vote
One of those rare gifted guitarists whose style is unclassifiable and talents are far-reaching, allowing him to cross over several musical genres with ease.
Zoom g3 multi-effect (197480 views)
Zoom A3 (Accoustic Multi-effect DI) (161699 views)
T.C Electronic G Natural( Accoustic Multi Effect) (161248 views)
Epiphone DR-100 Sunburst (159839 views)
Lexus ＧＳ　Year 2006 March Model (137571 views)
Eleven Rack guitar/audio interface (133315 views)
DoremiCafe (132899 views)
LAG Guitars (T66DCE) (132899 views)
Boss AD-8 (Acoustic Guitar Processor) (131354 views)
BOSS GT-100 (126571 views)